ကိုလံဘီယာအငှားအိမ် Teleservicios သည် Anton / Bauer Dionic XT နှင့် Cine VCLX ဘက်ထရီများကို ၀ ယ်သည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ကိုလံဘီယာငှားရမ်းခြင်းအိမ် Teleservicios Anton / Bauer Dionic XT နှင့် Cine VCLX ဘက်ထရီတို့ဝယ်ယူ
Shelton, Conn - ။ ဇန်နဝါရီလ 8, 2019 - Teleservicios (TSV ငှားရမ်းခြင်း), ကိုလံဘီယာအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ပစ္စည်းကိရိယာများထောက်ပံ့သူတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်ပစ္စည်းကိရိယာများအဆင့်မြှင့်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ယင်း၏အငှားစာရင်းမှ Anton / Bauer မိုဘိုင်းပါဝါစနစ်များသိသိသာသာအသံအတိုးအကျယ်ကဆက်ပြောသည်သိရသည်။ TSV ငှားရမ်းခြင်းရဲ့အသစ် Anton / Bauer ထုတ်ကုန် Cine VCLX အားသွင်းအတူ V-တောင်ပေါ်မှာ, 30 စွမ်းဆောင်ရည် Dual-V-တောင်ပေါ်မှာအားသွင်းနှင့် Cine VCLX အခမဲ့-ရပ်နေသောဘက်ထရီနှင့်အတူ 150 Dionic XT 14 10V Li-ion ဘက်ထရီထက်ပိုမိုပါဝင်သည်။
ဂိုတာတွင်အခြေစိုက်သော, TSV ငှားရမ်းခြင်း ENG ကင်မရာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများငှားရမ်းခြင်းအလတ်စားတီဗီဘူတာရန်, သိမ်းဆည်းများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကို digitizing နှင့်ပလေးအောက်န်ဆောင်မှုများအပါအဝင်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်န်ဆောင်မှုများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ ဖောက်သည်ကိုလံဘီယာရုပ်ရှင်ရုံများအတွက်ထိပ်တန်းကိုလံဘီယာ Netflix, အမေဇုန်နှင့် HBO များအတွက်အကြောင်းအရာဖန်တီးကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအိမ်များအဖြစ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများပါဝင်သည်။
Anton / Bauer ရဲ့ Dionic XT ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် 14.4V ရုပ်ရှင်ရုံ applications များများအတွက်အလွန်အမင်းလူကြိုက်များ Dionic ဘက်ထရီစီးရီး၏နောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ V-တောင်မှာနှင့်ရွှေတောင်ပေါ်မှာနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ဖျော်ဖြေ-မြင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း Dionic XT ရိုက်ကူးရေး, ထုတ်လွှင့်ခြင်း, ငှားရမ်းခြင်းအိမ်များနှင့်ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဘယ်သူကိုများအတွက်တခြားသူတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အာဏာ 12A မှအပ်နှံနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Anton / Bauer Cine VCLX အထူးသ 630V ရုပ်ရှင်နှင့် 24V ကဗီဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများပေါင်းစည်းဖို့ဒီဇိုင်းအာဏာအထုပ်ထဲမှာ NiMH ဆဲလ်ဓာတုဗေဒနည်းပညာ၏လုံခြုံမှုနှင့်မြင့်မားသောအာဏာမဲနှိုက်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါငျးတို့သကယ်တင်တတ်၏တဲ့ 14Wh NiMH ဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ်။ ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲခရီးသွားဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်း, Cine VCLX Cine နှင့်မြင့်မားသောဗို့အားအလင်းရောင် application များအတွက်ကစံပြအောင်မျိုးစုံ 14V နှင့် 28V XLR လက်ငင်းပါဝင်သည်။
"TSV ငှားရမ်းခြင်းရဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့ Anton / Bauer ဝယ်ယူကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းပါဝါဖြေရှင်းချက်များစွာသောထောက်ခံချက်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုမာကို Brea, ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာကလည်း, Vitec ထုတ်လုပ်မှု Solutions ။ "ဟုအဆိုပါကိုလံဘီယာအငှားစျေးကွက်တစ်ခုထွန်းသစ်ကစားသမားအဖြစ်, TSV ငှားရမ်းခြင်းပြီးသားထိပ်တန်းအရည်အသွေး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်ကြောင်းစီမံကိန်းများကိုတောင်းဆိုနေတာနဲ့အထင်ကြီး client ကိုစာရင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျစ်လစ်တဲ့အထုပ်မှာသူတို့ရဲ့ထူးချွန်စွမ်းရည်နှင့်၎င်းတို့၏တိုးမြှင့်ပါဝါကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူ, အထူးသဖြင့်ကမ်းလှမ်းမှုအတွက် Dionic XTs သည်အခြားဘက်ထရီ TSV ငှားရမ်းမှုကျော်တစ်ဦးထက်သာလွန်ရွေးချယ်မှုအသုံးပြုသောသိရပါတယ်။ "
Videointegrators ပို့ကုန်ကုမ္ပဏီ (Vidiexco), Anton / Bauer ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာဖြန့်ချိ, TSV ငှားရမ်းခြင်းရဲ့ Anton / Bauer ဝယ်ယူ facilitated ။ အဆိုပါ Anton / Bauer ဘက်ထရီအပြင်, TSV ငှားရမ်းမှုကိုလည်းထံမှ OConnor ထံမှ tripod, SmallHD ကနေမော်နီတာနှင့်ကြိုးမဲ့ကဗီဒီယိုစနစ်များထည့်သွင်းထားပြီး Teradek ယင်း၏အဆင့်မြှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများစာရင်းရန်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အငှားပစ္စည်းအများကြီးအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အချိန်ရောက်သောအခါ "ကျနော်တို့သဘာဝကျကျလှည့် Vitec Group မှအမှတ်တံဆိပ်, "Juan Sebastian ဇျ, ညွှန်ကြားရေးမှူး, TSV ငှားရမ်းခြင်းဟုဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ကကျနော်တို့အပေါ်ရေတွက်နိုင်ကိုသိရ Vitec ကိုအလုပ်များအငှားလုပ်ငန်းကွံပမှတက်မတ်တပ်ရပ်အဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်ဟုစက်မှုလုပ်ငန်း-စံထုတ်ကုန်ပေးရ Group မှ။ "
Anton / Bauer ကနေ Dionic XT90 နှင့် Dionic XT150 $ 499 ကနေစတင်ပါ။ အဆိုပါ Cine VCLX များအတွက်စျေးနှုန်း $ 2,585 မှာစတင်သည်။ Anton / Bauer နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် dionic.antonbauer.com/.
Anton / Bauer ၏တစ်ဦးကလျှပ်တစ်ပြက်
Anton / Bauer®ဒီဇိုင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ထုတ်လွှင့်, ရုပ်ရှင် / ဗီဒီယို, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကပ်လျက်စျေးကွက်များတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်မိုဘိုင်းပါဝါစနစ်များစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ကြမ်းတမ်းစနစ်များကိုယုံကြည်စိတ်ချရသော, မိုဘိုင်းပါဝါခြားနားချက်ကိုဘယ်မှာရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်အခြေအနေအဆင်ပြေအောင်နိုင်ပါသည်။ ရုပ်ရှင်အစုပေါ်တစ်တောင်ထိပ်ပေါ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဆေးရုံအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်, Anton / Bauer ရဲ့မိုဘိုင်းပါဝါစနစ်များတသမတ်တည်းရှိနိုင်ပါအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရရှိသည်ဖို့သကျသပွေ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအင်ဂျင်နီယာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ထူးချွန်အောင်မြင်မှုတစ်ခုEmmy®ဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်သိပ္ပံ-Tech မှအပါအဝင်, ဘက်ထရီ-system ကိုနည်းပညာတိုးတက်မှုများအတွက်အများအပြားမူပိုင်ခွင့်များနှင့်ဆုရရှိထားသူ အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်®။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.antonbauer.com.
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/190108AntonBauer.docx
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/AntonBauer-DIonicXTinAmazonia.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: အဆိုပါ Anton / Bauer Dionic XT ဘက်ထရီကိုလံဘီယာရဲ့ Amazonia ဒေသတွင်း၌ On-တည်နေရာမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူး။ အဆိုပါ Dionic XTs မကြာသေးမီကအနေနဲ့လာမည့်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးများအတွက်အစွန်းရောက်ရိုက်ကူးဖမ်းယူကူညီရန် Teleservicios အားဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
တွစ်တာပေါ်မှာ Share:twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]%20in%20Colombia%20makes%20major%20purchase%20of%[အီးမေးလျ protected]_Bauer%20Dionic%20XT%20and%20Cine%20VCLX%20batteries.%20%23vidiexco%20%23dionic%20%23antonbauer%20%23mobilepower%20%23VitecGroup%20%20-%20http://bit.ly/2SD3fgO
Anton / Bauer ဘက်ထရီ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Cine VCLX ကိုလံဘီယာငှားရမ်းခြင်းအိမ် Dionic XT လှံ & Arrows Teleservicios တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-01-08
ယခင်: Convergence အိန္ဒိယ 2019 မှာသဟဇာတ OTT, SaaS နှင့် UHD Solutions နှင့်အတူဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များနှင့် Service Providers Gain ဖျတ်လတ်သွက်လက်စေ
နောက်တစ်ခု: ChyronHego နှင့်မြက်ချိုင့်ရေးအဖွဲ့ Up ကိုပေါင်းစည်းဂရစ်ဖစ်ဖန်ဆင်းခြင်းကယ်ယူနှင့်အားကစားဆိုင်ရာ Arena များအတွက်ဖြေရှင်းနည်းသို့ပြောင်းပါမှ